Italia " Journey-Assist - Tena «Makkah» iray ho an'ny mpizahatany rehetra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Italia
Fiantsenana any Italia
Toe-javatra fototra ao Italia
I Italia dia fanjakana eo afovoan-tany Mediterane. Izy io dia tafiditra ao anatin'ny vondrona eoropeana sy OTAN. Amin'ny maha mpifanolobodirindrina aminy, manana France any avaratra-andrefana, Aotrisy sy Suisse any avaratra izy, ary miaraka amin'i Slovenia any avaratra-atsinanana.
Fantatra amin'ny Italia
Italia dia iray amin'ireo firenena malaza indrindra amin'ny mpizahatany manerana izao tontolo izao. Izy io dia be mpitia amin'ny tantarany manan-karena ary mety ho an'ny kolontsaina sy fanabeazana, ary amin'ny fialamboly na amin'ny asa ivelany.
Italiana amin'ny voninahiny rehetra
Inona no hatao any Italia?
Ny fananan'ity firenena ity dia misy ny resort ski. Ny avo indrindra amin'izy ireo dia Breuil-Cervinia. Manomboka amin'ny Desambra ka hatramin'ny Mey dia rakotra lanezy tsy tapaka izy io. Amin'ny fahavaratra anefa dia tsy mifarana ny vanim-potoanan'ny ski. Miorina amin'ny haavo manodidina ny 3 m fotsiny izy. Misy ihany koa ny fotoana mitaingina soavaly, mitsambikina parachute na mankafy ny toerana eny ambony rehefa manidina amin'ny angidimby.
Ski fomba fivarotana Breuil-Cervinia, Italia
Ny Dolomites dia faritra iray ifantohana ho an'ny toeram-pialantsasatra an-tendrombohitra maro. Ny malaza indrindra dia i Alta Badia, izay misy resort fialan-tsasatra marobe, ary Araba, miorina amin'ny haavon'ny 1 metatra akaikin'i Venise, miaraka amina làlana maro be fanamby mety ho an'ireo mpanao ski efa za-draharaha indrindra.
Alta Badia ski resort, Italia
Ski resort Arabba, Italia
Ny faritra malaza indrindra amin'ny torapasika amoron-dranomasina any Italia dia miorina eo amoron'ny Ranomasina Adriatika. Ity faritra ity dia manana toetr'andro malefaka, sary mahafinaritra, moron-dranomasina faran'izay tsara ary fotodrafitrasa tsy misy fotony. Ny trano fandraisam-bahiny italiana Adriatika dia Ravenna, Rimini, Bellaria, Gabicce Mare, Riccione ary Pesaro. Genoa no toeram-pialofana malaza indrindra amoron'ny ranomasina Ligurian. Eto ianao dia afaka manambatra am-pahombiazana ny fialan-tsasatry ny morontsiraka sy ny programa fitsangatsanganana manan-karena. Eo amoron'ny Ranomasina Tyrrhenian dia misy torapasika fasika maro ihany koa ho an'ny tsiro tsirairay, manomboka amin'ny kely sy milamina ka hatramin'ny malalaka sy malalaka.
Torapasika Rimini any Italia
Beach any Ballaria
Tora-pasika ao Gabicce Mare
Torapasika ao Riccione, Italia
Pesaro - morontsiraka any Italia
Amin'ity faritra ity dia i Roma, Naples, Salerno ary Cosenza. Noho izany, azonao atao koa ny manambatra ny fialantsasatra amoron-dranomasina sy ny programa fitsangatsanganana.
Roma - ny tanàna iray manontolo, toy ny tranombakoka kolontsaina taloha
Roma - ny tanàna iray manontolo ho toy ny tsangambato
Naples amin'ny voninahiny rehetra
Salerno - sarotra ny mijanona ho tsy miraharaha
Cosenza - ho an'ireo mpankafy ny fahatsorana
Vitsy ny olona tsy tia ny lovia italianina malaza - ny paty amin'ny karazany maro, lasagna, fromazy marobe, risotto, pizza. Ary, mazava ho azy, ny divay italiana dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao.
Sakafo ao amin'ny grotto ny Palazzese
Noho izany, Italia dia firenena mety amin'ny fialam-boly, mety amin'ny karazana fizahan-tany. Izy io dia mahaliana ho an'ireo izay tia fitsaharana fanabeazana sy fitsangatsanganana, ary ho an'ireo izay tia fotoana mangina eny amoron-dranomasina. Toeram-pisakafoanana ski maro no miandry ny mpanao ski eto, ary ny sakafo matsiro. Noho izany, ny mpizahatany tsirairay dia afaka misafidy ny fialan-tsasatra tsara indrindra ho an'ny tenany sy ny antony hiverenan'ity firenena ity hatrany hatrany.
Toetr'andro any Italia
Any amin'ny tapany avaratr'i Italia dia manjaka ny toetr'andro, ary amin'ny afovoany sy atsimo - ny subtropika Mediteraneana. Ny fahasamihafana eo amin'ny toetrandro italianina dia noho ny halavan'ny firenena amin'ny halavam-potoana, ary koa ny fanampiana any an-tendrombohitra amin'ny ampahany lehibe amin'ny faritaniny.
Ny hafanana amin'ny rivotra ao Italia. (Andro)
Ny mari-pana any Italia mandritra ny volana maromaro
Presipitation in Italy (mm)
Padan Plain dia toerana misy fifindrana avy amin'ny toetrandro subtropika mankany amin'ny toetr'andro antonony. Ny vanin-taona mafana eto dia malefaka be (ny isotherm Jolay dia +23), ary ny ririnina dia mangatsiatsiaka ary manjavozavo (ny isotherm volana janoary dia 0 degre). Eo afovoan'ny saikinosy Apennine, dia misy karazan-toetr'andro any ambanin'ny tany. Mafana ny fahavaratra eto (ny isotherm amin'ny volana jolay dia manomboka amin'ny +24 ka hatramin'ny +32 amin'ny toerana samy hafa), ary mafana ny ririnina (ny isotherm amin'ny volana janoary dia tsy ambany noho ny +5).
Hevitry ny toetrandro any Italia
Noho ny maha-marim-pototra ny famelana italianina, ny mari-pana amin'ny rivotra dia voafaritra amin'ny haavon'ny faritra iray manokana. Na any amin'ny faritra afrikanina romanina sy Turin aza, izay mandeha moramora mankany amin'ny tampon-trano, dia mafana kokoa noho ny faritra afovoany amin'ireny tanàna ireny ny rivotra.
Any amin'ireo faritra talohan'ny Alpine dia azo jerena mazava kokoa izany - eo akaikin'ny tehezan'ireo tendrombohitra misy tendro-tampon'ny oram-panala, dia mamoa saika mandritra ny taona ny voankazo.
Toetany ao amin'ny faritra be tendrombohitra any Italia
Any amin'ny faritra be tendrombohitra any Alpes dia miovaova ny toetrandro: somary antonony ny haavon'ny tendrombohitra, ary mangatsiaka ny tampony. Miakatra ny haavon'ny hafanana, tsy ny fihenan'ny maripana ihany, fa ny fahasamihafana misy eo amin'ny mari-pana amin'ny alina sy ny andro koa dia mitombo. Ny oram-panala any an-tendrombohitra dia afaka mitatra mandritra ny enim-bolana, eo an-tampon'ny tampony dia tsy tapaka izy io, ary manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Mey dia misy oram-panala mavesatra.
Toetany ao atsimon'i Italia
Any amin'ny faritra atsimon'i Italia amin'ny volana martsa dia nanomboka nitsoka ny rivotra mafana sy maina avy any Sahara, antsoina hoe "sirocco". Mijanona tsy hitsoka amin'ny volana Oktobra. Amin'izao fotoana izao, ny mari-pana amin'ny rivotra dia mahatratra +35 ary lasa maina sy vovoka kokoa izy. Ny rivotra mangatsiaka tramontana dia mitsoka avy any amin'ny Apennines, saingy amin'ny ririnina no mitranga izany.
Weather in Italia ankehitriny + forecast
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, oram-batravatra any Italia. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
I Italia no Mkah an'ny mpivarotra 🙂
Italia dia azo antsoina hoe fanjakan'ny fiantsenana marina. Izy io dia "Mecca" malaza eran-tany amin'ny lamaody. Ambonin'izany, ny fividianana na dia amin'ny butikety lafo vidy indrindra aza eto dia somary lafo ihany. Rehefa dinihina tokoa, na dia tsy misy fihenam-bidy aza, ny haavon'ny vidiny eto dia 20-25 isan-jato ambany noho ny an'ny ankamaroan'ny firenena eropeana. Betsaka koa ny toeram-pivarotana eto amin'ity firenena ity izay manome fihenam-bidy. Mandritra ny varotra dia mahavonjy 80 isan-jato ianao indraindray.
Fihenam-bidy any Italia
Varotra "Conti" sy "Saldi"
Ny varotra, izay antsoina hoe "skonti" na "saldi" any Italia, dia atao araka ny fenitra ho an'ny Eropa sisa: nanomboka ny andro voalohan'ny volana Jolay ka hatramin'ny faha-2 ny volana aogositra ary nanomboka tamin'ny andro voalohan'ny volana Janoary ka hatramin'ny faran'ny volana Febroary. Na izany aza, ny fotoana dia miovaova kely amin'ny faritra samihafa.
Namidy any Italia. Mila mahay mandanjalanja
Tamin'ny voalohany, amin'ny fivarotana, ny vidin'ny dia mihena hatramin'ny 15-20 isan-jato, fa amin'ny faran'ny varotra dia mety hahatratra 80 isan-jato ny fihenam-bidy. Marina fa io dia mihatra amin'ny tsenan'ny masifika ihany.
Sonti. Namidy any Italia
Amin'ny kiraro lafo dia misy fihenam-bidy matetika mihoatra ny 20 isan-jato, ary indraindray ny fivarotana toy izany dia tsy mandray anjara mihitsy amin'ny varotra.
Saingy manana ny "varotra" ho an'ny mpanjifa mahazatra izy ireo, ary ny entana tsy amidy avy amin'ny fanangonana dia alefa any amin'ny toeram-pivarotana.
Ny nahandro italianina no reharehan'ny firenena. Ny sakafo rehetra ho an'ny Italiana dia fombafomba tena izy.
Ny lovia eo an-toerana no anisan'ny maivana indrindra sy mahasalama indrindra. Noho izany, tsy afaka manahy momba ny tarehinao amin'ny dia ianao. Ny trano fisakafoanana rehetra eto amin'ity firenena ity dia manome sakafo vaovao fotsiny. Ny trondro vovo dia zara raha mahandro eto ary ny mofo tsy madio.
Sakafo italiana tsara indrindra:
Lasagna italiana mahazatra
Lasagna dia lovia vita amin'ny ravina paty misy famenoana (parmesan, mozzarella, ham, ricotta, hazan-dranomasina, hen'omby, salmon, holatra dia azo ampiasaina ho ity farany).
Pasta - paty misy saosy sy famenoana isan-karazany.
Pasta vonona. Toa masaka!
Mametaka. Pasta Italiana
Ravioli dia dumplings kely misy famenoana hena.
Pizza dia vokatra lafarinina malaza eran'izao tontolo izao misy famenoana isan-karazany.
Chicken Parmesan dia lovia vita amin'ny akoho malemilemy misy fromazy ary saosy manokana.
Toy izany ny tanin'i Italia
Coat of arm of Italy
Fivavahana: Firenena miafina.
Kaody finday: 39 +
Sehatra Internet: .IT